Ithegi: ukuthengwa | Martech Zone
Xa amashishini ehlalutya intambo yawo yentengiso, into abazama ukuyenza kukuqonda ngcono isigaba ngasinye kuhambo lwabathengi babo lokuchonga ukuba zeziphi izicwangciso abanokuzifeza ngezinto ezimbini: Ubungakanani -Ukuba intengiso inokutsala amanye amathemba ke oko kunokwenzeka ukuba amathuba Ukukhulisa ishishini labo kuya kunyuka ngenxa yokuba amaqondo okuguqula ahlala azinzile. Ngamanye amagama ...
Ukubhaka "kubukrelekrele" kwiiPhulo zokuqhuba kwiWebhu
NgoLwesibini, Matshi 21, 2017 UGeorge Leon
Iphulo langoku "lokuqhubela kwiwebhu" lingaphezulu kokutyhala abathengi kwiphepha elihambelanayo lokufika. Itekhnoloji yokuhambisa kunye nesoftware yentengiso ehlala iguquka, kunye nokuqonda indlela yokwenza amaphulo anamandla kunye nawomntu avelisa iziphumo zewebhu. I-Shift ekugxilwe kuyo Uncedo lokuba iarhente ehambele phambili enje ngeHawthorne ibambe ukukwazi ukujonga hayi kuphela kwi-analytics, kodwa nokujonga amava omsebenzisi kunye nokuzibandakanya. Yi le
Iihambo zabaThengi abaThengisayo Zitshintshe ngokupheleleyo
NgoLwesithathu, nge-6 kaJanuwari 2016 NgoLwesine, uJanuwari 7, 2016 Douglas Karr
Ngamanye amaxesha ndiye ndizibuze ukuba ndibhale ikhulu lezinye izithuba malunga nokutshintsha indlela oziphatha ngayo, kunye nemithombo eyongezelelweyo yedatha, ukuba ngaba ithemba liya kuqala ukumamela. Kubonakala ngathi abaphulaphuli, nangona kunjalo. Xa sisiva ukuba sohlukile kwaye senze uphando sihlala sifumana into enye. Ukuziphatha kokuthenga kwabathengi kuyatshintsha. Utshintsho belucotha ekuqaleni, kodwa ngoku luyakhawuleza. Kwiminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo, kwiindwendwe ezili-10 - 1 okanye 2
I-Playbook yeNtengiso ye-B2B ekwi-Intanethi
Olu luphawu lwentelekelelo olumnandi kwizicwangciso ezisetyenziswe malunga nesicwangciso esiphumeleleyo seshishini kwi-intanethi. Njengoko sisebenza kunye nabathengi bethu, oku kusondele kakhulu kwinkangeleko ngokubanzi kunye nokuziva kuthethathethwano lwethu. Ukwenza intengiso ye-B2B kwi-Intanethi ayizukunyusa impumelelo kwaye iwebhusayithi yakho ayizukuvelisa nje ngomlingo ishishini elitsha kuba likho kwaye libukeka lilungile. Udinga izicwangciso ezifanelekileyo zokutsala iindwendwe kunye nokuguqula
Ukuthengiswa okuCwangcisiweyo: Kutheni le nto kufuneka ulungelelanise iCandelo leBrand ekusebenzeni nasekuXeleni
NgoLwesine, uJuni 19, 2014 UMgwebi uGraham
Ngomthamo omkhulu wedatha eyenziweyo kumajelo amaninzi entengiso, iimveliso zinikwa umngeni wokuququzelela kunye nokusebenzisa iiasethi zedatha elungileyo ukukhulisa ukusebenza kwejelo lomnqamlezo. Ukuqonda ngcono abaphulaphuli ekujoliswe kubo, ukuqhuba ukuthengisa ngakumbi, kunye nokunciphisa inkunkuma yentengiso, kuya kufuneka ulungelelanise icandelo lakho lebrendi kunye nokusebenza kwedijithali kunye nokwenza ingxelo. Kuya kufuneka ulungelelanise ukuba kutheni bethenga kunye nokuba ngubani othengayo (isahlulo sabaphulaphuli) kunye nantoni (amava) kwaye njani (ukwenziwa kwedijithali) ukuze konke